भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिका–४ ले साबिक दधिकोट गाविसको वडा नं. ४ देखि ९ सम्मलाई समेटेको छ । पहाडी र भिरालो जमिन रहेको वडामा ग्रामीण बस्ती धेरै छन् । तर, सहरीकरण र जनसंख्याको चाप भने बर्सेनि तीव्रगतिमा बढिरहेको छ ।
दुई हजार पाँच सय ४६ घरधुरी रहेको वडाको जनसंख्या १५ हजार दुई सय ७६ छ । वडाको विकास, समस्या र समाधानका लागि वडाध्यक्ष उत्तम थापासँग गरेको संवाद ।
स्थानीय सरकार गठन भएपछि वडा कार्यालयको सेवालाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएका जनताको आशा र अपेक्षा हामीमाथि भयो । जनताका माग र आवश्यकता यति धेरै छन् कि स–साना भए पनि एकैपटक पूरा गर्न सकिने अवस्था रहेन । अहिले कमसेकम विगतभन्दा फरक महसुस गराउन कोसिस गरिरहेका छौँ । वडामा अधिकृतसहित ८–१० जना कर्मचारी आवश्यक छन् । तर, अहिले कार्यालय सहयोगीबाट खरीदारको काम लिनुपरेको छ । म आफैँ कर्मचारीझैँ वडा कार्यालयमा खटिएको छु ।
प्रायः बिहान साढे १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म वडा कार्यालयमा बसेर काम गर्छु । बाँकी समय नगरपालिकामा बैठक, कार्यक्रम र गोष्ठीलाई दिन्छु । कहिलेकाँही त वडामै साँझ पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह गठन भएपछि वडालाई थुप्रै अधिकार दिइएको छ । तर, आर्थिक अधिकार दिइएको छैन । हामीले वडाबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउँछौँ, तर वडाका लागि चाहिने दुईवटा कुर्सी आफैँले खर्च गरेर खरिद गर्न पाउदैनौँ । दुई रुपैयाँ कसैलाई सहयोग गर्न प-यो भने गोजीबाटै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
पहिलेका स्थानीय निकायमा बजेट थोरै आउँथ्यो, तर आन्तरिक आम्दानीको खर्च गर्ने अधिकार थियो । अहिले बजेट बढेको छ । आन्तरिक आम्दानी पनि बढेको छ । तर, हामीलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छैन । केही समस्याहरू छन्, तर संघीयताको नयाँ अभ्यास भएकाले क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएको छु ।
वडामा देखिएका मुख्य समस्याहरू के–के हुन् ?
वडामा समस्या थुप्रै छन् । तीमध्ये खानेपानीको समस्या मुख्य हो । हरेकजसो टोलमा सडकको ट्र्याक पुगेको छ । तर, सडक साँघुरा र कच्ची मात्रै छन् । धुलाम्मे र हिलाम्मे हुँदा वडावासीलाई सास्ती छ । बढ्दो सहरीकरणका कारण ढल व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । सरकारी शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर गिरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि समस्या छन् ।
धुलो र हिलोमुक्त सडक कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ ?
हामी निर्वाचित भएपछि वडामा मात्रै हैन, सिंगो नगरपालिकामा नै सडकको विकासलाई जोड दिएका छौँ । वास्तवमा विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडक हो । वडा क्षेत्रका अधिकांश टोलमा सडक पुगेको छ । तर, कुनै पनि सडक कालोपत्रे छैनन् । हामीसँग अहिले जम्मा दुई किमि सडक मात्रै कालोपत्रे छ । गत वर्ष दुई वर्षको बजेटमध्ये मोटो रकम सडकमै खर्च भएको छ । हामीले हिङचोक–गाम्चा सडकको सीमांकन गर्ने र वाल लगाउने काम गरिरहेका छौँ । अब सडक विभागबाट ६ करोड रुपैयाँमा थप निर्माणको काम अघि बढ्दै छ ।
आव ०७५/७६ मा हाम्रो वडाको, नगरपालिकाको र प्रदेश सरकारको समेत गरी तीन करोडमा सडकको डेढ किमि खण्डमा सीमांकन वाल लगाइएको छ । चित्रपुर–सिरुटार सडक र सिकारीटार–उत्तिसघारी सडकमा पनि सीमांकनको काम भएको छ । ठिमी–तरखाल, महेन्द्रशान्ति–घ्याम्पेडाँडा, कटुन्जे–गाम्चा–लुभु सडक, दक्षिणबाराही–सिरुटार सडक, गुन्डु–तरखाल–जिल्ला चक्रपथ सडक, हर्षचोक–मगरगाउँ सडक आदि हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । क्रमशः यी सडकको सीमांकन गर्ने र कालोपत्रे गर्ने काम अघि बढाउँछौँ । मैले नगरपालिका, प्रदेश र सडक विभागसम्म वडाका सडकको स्तरोन्नतिका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।
खानेपानी र ढलको अवस्था कस्तो छ ?
प्राकृतिक रूपमा रहेका मुहान अब कमै मात्र बाँकी छन् । अझै पनि करिब २० प्रतिशत वडावासीका घरमा धारो छैन । उपभोक्ताको संख्या र माग दुवै बढ्दै गर्दा हामीले पानीको मुहानलाई उसैगरी व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ ।
वडा क्षेत्रमा करिब १० वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको उत्तिसघारी मुहान अझै बाँकी छ । तर, पानीको मात्रा बर्षेनि घट्दो छ । अन्य चरखण्डी, उत्तिसबारी र जोगीपाटी नजिकै हामीले विगतदेखि नै डिपबोरिङ गरेर पानी वितरण गरेका थियौँ । तर, अहिले त्यहाँ पनि पानी घटेको छ । पहिले आठ लिटर प्रतिसेकेण्ड आउने गरेकामा अहिले प्रतिसेकेण्ड तीन लिटर मात्रै पानी आउने गरेको छ । जमिनमा पानी रिचार्जका लागि पोखरीहरूको निर्माण र संरक्षण थालेका छौँ । फेरि पनि डिपबोरिङ गर्ने र पानी वितरण गर्नेबाहेक तुरुन्तै अर्को समाधानको बाटो छैन ।
अर्को, ढल व्यवस्थापनको विषय अझै जटिल बनेको छ । बर्षेनि सरदर ५–७ सय घर थपिनेक्रम छ । तर, त्यहाँबाट निस्किने ढल र फोहोरको व्यवस्थापनमा समस्या छ । विशेष गरी हर्षचोक, दक्षिणबाराही, चख्खुफाँटलगायत बाक्लो बस्ती भएका ठाउँमा ढलको समस्या छ । ढल व्यवस्थापनका लािग फिल्टर प्लान्ट चाहिने हो, तर हामीकहाँ त्यसका लागि उपयुक्त जग्गा छैन । अहिले हनुमन्ते नदीमा लगेर मिसाइएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ? भक्तपुर भ्युप्वाइन्ट बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?
हामीले वडाको पर्यटन विकासका लागि अनन्तलिंगेश्वर मन्दिरसँगै भक्तपुर भ्युप्वाइन्ट निर्माणको योजना अघि सारेका छौँ । यहाँको कैलाश डाँडा आफैँमा भ्युटावरझैँ छ । हामीले अझै एउटा सुविधा सम्पन्न भ्युप्वाइन्ट निर्माण गरी पर्यटन विकासका लागि योजना बनाएका हौँ । ४२ फिट अग्लो तीनतले टावर निर्माण गर्न दुई करोड रुपैयाँमा टेन्डर लागिसकेको छ ।
अब सम्झौता भएर काम सुरु हुन बाँकी छ । टावर बनेपछि मनोरम हिमशृंखलासहित सूर्योदयको दृश्य, उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाको दृश्य एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो भ्युटावर मेरै कार्यकालमा पूरा गर्ने र यहाँको लिच्छविकालीन अनन्तलिंगेश्वर मन्दिरसँग जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सोच छ ।
वडामा अरू पनि धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा छन् । हालै दक्षिणबाराही पार्क निर्माण थालेका छौँ । करिब दुई रोपनी क्षेत्रमा बन्ने पार्कमा अहिले ५० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब २० लाख रुपैयाँ चालू वर्षमा खर्च हुँदै छ । केटाकेटी र युवायुवतीका लागि छुट्टाछुट्टै पार्क निर्माण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ ।
शैक्षिक सुधारका लागि के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
ग्रामीण बस्ती भए पनि नजिकै सहर भएकाले यहाँका अभिभावकमा छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने प्रतिस्पर्धा छ । यहाँ रहेका एक माध्यमिकसहित चारवटा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै गिर्दो अवस्थामा छ । त्यसलाई सुधार गर्न नगरपालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐनमार्फत विशेष योजना बनाएको छ । जनप्रतिनिधि नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था लागू भएपछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिँदो छ ।
तपाईंको वडामा नगरकै एक मात्र अस्पताल बनाउने योजना छ । कसरी काम भइरहेको छ ?
सूर्यविनायक नगरपालिकामा स्वास्थ्यको भरपर्दो पहुँच विस्तार भइसकेको छैन । नगरपालिकामै एउटा पनि भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने अस्पताल नभइरहेका वेला ग्रामीण क्षेत्र रहेको हाम्रो वडामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
नगरपालिकाले अहिले हाम्रै वडामा रहेको दधिकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शय्याको आधुनिक दधिकोट सामुदायिक अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको छ । तर, पूर्वाधारको समस्या छ । हामीले हालै एउटा नयाँ भवन बनाएका छौँ । चारजना डाक्टर छन् । सेवा राम्रो छ ।
उपकरण खरिद र व्यवस्थापनमा पनि जोड दिएका छौँ । तर, अब थप चाहिने पूर्वाधार विस्तारमा समस्या छ । भवन बनाउन जग्गा छैन । जग्गा कसैले दिदैन । जग्गा किनेर भवन बनाउन र अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन । हामीले जग्गा नभएकै कारण अस्पतालका लागि आएको पाँच करोड रुपैयाँ गुमायौँ ।
गुण्डुको विकासमा प्रतिवद्ध छु : अध्यक्ष सापकोटा
पाँच वर्षमा नेपालकै नमूना नगर पालिका ........................ ः मदन शुन्दर श्रेष्ठ, नगर प्रमुख, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, भक्तपुर
पाँच वर्षमा नेपालकै नमूना नगर पालिका बनाउँने मेरो सपना छ ः मदन शुन्दर श्रेष्ठ, नगर प्रमुख, मध्यपुर थिमि नगरपालिका, भक्तपुर
विकास निर्माणमा सबै जनप्रतिनिधि एक छौ ः बासुदेव थापा, प्रमुख सूर्यविनायक नगरपालिका
अन्य सहकारी भन्दा हामी प्रिथक छौ, नारायण प्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष, पबित्र हलेसीधाम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. गठ्ठाघर, भक्तपुर
सहकारी वार्ता हामीले सदस्यलाई अत्याधुनिक सुविधा दिदै आएका छौ–बोगटी, अध्यक्ष, बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी, गठ्ठाघर